Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny fifandraisana amin'ny Mac 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Apple Macs sy MacBooks dia solosaina tena tsara tarehy hijerena sy apetraka ao amin'ny birao na eo amin'ny birao, fa koa, amin'ny hatsaran-tarehiny sy ny fahalavorariany, dia solosaina ihany izy ireo, ka afaka mijanona tsy miasa izy ireo ary mety hanana olana amin'ny fifandraisana. tsotra na kely kokoa hamahana.
Raha tsikaritray amin'ny Mac-nay fa misy ny fifandraisana Internet ary mandeha, dia tsy misokatra tsara ny pejin-tranonkala na tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny rindranasa mampiasa serivisy Internet (toy ny VoIP na ny rindranasa fampahalalana video), dia nahatratra ny torolàlana mety ianao: eto raha ny marina dia ho hitantsika ny fomba rehetra, tsotra sy haingana hampiharana na dia ho an'ny mpampiasa vao, aza avereno amin'ny laoniny ny fifandraisana amin'ny tambajotra Machahafahanao miverina amin'ny fisintomana sy mampakatra hafainganana hitanao talohan'ny nitrangan'ny olana ary miverina miasa na mianatra amin'ny Mac anao toa ny tsy nisy.
VAKIO IZAO: Vahaolana amin'ny olan'ny fifandraisana amin'ny router sy wifi
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny fifandraisana Mac
Mba hamerenana amin'ny laoniny ny fifandraisana amin'ny Mac dia hasehonay anao ny fitaovana fitiliana hita ao amin'ny rafitry ny macOS izay vonona hampiasaina avy hatrany sy ny tetika manam-pahaizana sasany hiasa indray ny fifandraisana Internet toa ny nanombohantsika ny Mac voalohany.
Mampiasà diagnostika tsy misy tariby
Raha mitranga ny olan'ny fifandraisana rehefa mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi isika dia afaka mizaha toetra miaraka amin'ilay fitaovana Fitiliam-batana tsy misy porofo nomen'ny Apple mihitsy. Raha hampiasa azy io dia alao antoka fa mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi ianao, tsindrio ary tazomy Safidy (Alt), andao mankany amin'ny menio misy ny Wi-Fi eo ankavanan'ny ambony ary tsindrio Sokafy diagnostika tsy misy tariby.
Ampidirinay ny kaontin'ny kaontin'ny mpandrindra, avy eo miandry ny fitaovana hanatanterahana ny fanamarinana azy izahay. Miankina amin'ny valiny, ny varavarankely dia mety hisokatra miaraka amin'ny soso-kevitra vitsivitsy harahina, fa mety hiseho koa ny varavarankely famintinana ireo hetsika nataon'ny Mac hamerenana amin'ny laoniny ny fifandraisana. Raha miserana ny olana (tonga ny andalana ary mandeha) dia mety hiseho koa ny varavarankely toa an'ity manaraka ity.
Amin'ity tranga ity dia tsara ny mampihetsika ny feo Fehezo ny fifandraisana Wi-Fi anao, hamela ny lahasa hanamarina ny fifandraisana amin'ny Mac, mba hahafahany miditra an-tsehatra raha sendra olana. Fanokafana ny lahatsoratra Mandehana amin'ny famintinana Fa kosa, hahazo famintinana ny fampahalalana momba ny tambajotra misy anay izahay ary toro-hevitra mahasoa amin'ny fampiharana.
Ovay ny DNS
DNS dia serivisy iray manan-danja amin'ny fifandraisana Internet ary, na dia mandeha tsara aza ny tsipika ary mifandray ny modem dia ampy ny fisian'ny serivisy ity (ohatra, noho ny fahatapahan'ny DNS an'ny mpandraharaha) hialana amin'ny fifandraisana amin'ny fotoana rehetra. tranonkala.
Raha te hijery raha misy ifandraisany amin'ny DNS ny olana dia sokafy ny menio Wifi O Ethernet any ankavanana ambony, tsindrio ilay entana Sokafy ny fidirana amin'ny tambajotra, andao mankany amin'ny fifandraisana mavitrika amin'izao fotoana izao, tsindrio ny Advanced ary farany mankany amin'ny efijery DNS.
Ho hitantsika amin'ny ankapobeny ny adiresy IP an'ny modem na ny router anay, saingy afaka manampy mpizara DNS vaovao izahay amin'ny alàlan'ny fanindriana ny kisary + etsy ambany ary manoratra 8.8.8.8 (Google DNS, miakatra sy mandeha foana). Avy eo hamafa ny mpizara DNS taloha izahay ary hanery eo amin'ny farany ambany Okay, tsy hampiasa afa-tsy ilay mpizara nofidianay. Raha te hahalala bebe kokoa dia afaka mamaky ny torolàlana ihany koa isika Ahoana ny fomba fanovana DNS.
Fafao ny fikirakirana tamba-jotra sy ny rakitra safidinao
Raha tsy voavahan'ny Wireless Diagnosis sy ny fiovan'ny DNS ny olan'ny fifandraisana dia afaka manandrana mamafa ny tambajotra misy ao anaty rafitra isika, mba hamerenana ny fidirana amin'ny tambajotra Wi-Fi ampiasaina mandraka ankehitriny. Hanohizana, vonoy ny fifandraisana Wi-Fi miasa ankehitriny (avy amin'ny menio Wi-Fi ambony ankavanana), sokafy ny Finder ao amin'ny bara Dock eo ambany, mankeny amin'ny menio O, hisokatra isika Mankanesa ao anaty fampirimana ary manoratra izao lalana manaraka izao izahay.
/ Fitehirizam-boky / Fiderana / Fikirana rafitra
Raha vantany vao misokatra ity fampirimana ity, mamafao na afindrao ao amin'ny fitoeram-bokatra Mac ny fanodinana manaraka:
Hamafana ny fisie rehetra izahay, avy eo hamerina ny Mac mba hiantraika ireo fanovana. Rehefa miverina indray dia manandrana mifandray amin'ny tambajotra Wi-Fi manafintohina indray izahay, hijerena raha mandeha tsara ny fifandraisana.
Torohevitra mahasoa hafa
Raha tsy mahavaha izany isika dia mila manadihady bebe kokoa, satria mety hisy olana izay tsy misy fiatraikany mivantana amin'ny Mac fa misy ny modem / ny router na ny karazan-tserasera ampifandraisintsika aminy. Mba hanandramana manamboatra azy dia nanandrana ihany koa ireo torohevitra nomen'ity lisitra manaraka ity izahay:
Andao hamerina ny modem- Ity dia iray amin'ireo torohevitra tsotra indrindra, saingy tena afaka mamaha ny olana izany, indrindra raha misy fitaovana hafa mifandray amin'ilay tamba-jotra mitovy ihany koa amin'ny Mac. Ny famerenana indray dia hamela anao hamerina haingana ilay fifandraisana nefa tsy mila manao zavatra hafa.
Mampiasa fifandraisana Wi-Fi 5 GHz izahay- Ny Macs maoderina rehetra dia misy fifandraisana misy tarika roa ary tsara kokoa raha mampiasa ny tarika 5 GHz foana, tsy dia manelingelina fironana amin'ireo tambajotra eo akaiky eo ary haingana be kokoa amin'ny sehatra rehetra. Raha te hahalala bebe kokoa dia afaka mamaky ny torolàlana ho antsika isika Ny tsy fitoviana eo amin'ny tamba-jotra Wi-Fi 2,4 GHz sy 5 GHz; iza no tsara kokoa?
Mampiasa ny fifandraisana Ethernet izahay: fomba hafa haingana hahafantarana raha ny olana dia ny fifandraisana Wi-Fi dia misy ny fampiasana tariby Ethernet lava be, mba hahafahanao mampifandray ny Mac amin'ny modem na dia avy amin'ny efitrano samihafa aza. Raha mandeha ny fifandraisana, ny olana dia ny maodelma Wi-Fi an'ny Mac na ny modely Wi-Fi an'ny modem, araka ny hita ao amin'ny torolàlana. Vahaolana amin'ny olan'ny fifandraisana amin'ny router sy wifi.
Manafoana ny Range Extender na Powerline izahay: Raha mampifandray ny Mac amin'ny alàlan'ny Wi-Fi Extender na Powerline izahay dia manandrana manafoana azy ireo ary mifandray mivantana amin'ny tamba-jotra modem na mampiasa tariby Ethernet. Ilaina tokoa ireo fitaovana ireo, saingy afaka manafana be loatra ny fotoana ary manakana ny fifandraisana Internet mandra-panala azy ireo ary mifandray indray aorian'ny minitra vitsy.
Ny fampiharana ireo torohevitra rehetra aseho amin'ity toro-lalana ity dia afaka mamaha ny ankamaroan'ny olan'ny fifandraisana Mac isika, fa tsy mila miantso teknisiana solosaina na mandeha amin'ny fitaovana hafa ary lasa adala amin'ireo torolàlana sarotra sy sarotra arahin'arivony ao amin'ny Web.
Raha, na eo aza ny torohevitra ao amin'ny torolàlana, ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra dia tsy mandeha amin'ny Mac, tsy misy zavatra tokony hatao afa-tsy ny manomboka fombafomba fanarenana aorian'ny fitahirizana rakitra manokana ao amin'ny USB mitondra fiara ivelany; hanohy ny famerenana amin'ny laoniny vakio fotsiny ireo mpitari-dalana antsika Ahoana no manamboatra Mac, manamboatra olana sy lesoka macOS mi Fomba 9 hanombohana indray ny Mac anao ary hamerenana amin'ny laoniny ny fanombohana mety.
Mifandray amin'ny Wi-Fi aho fa tsy mizaha: inona no hatao?
Ahoana ny fanamarinana ny fandrakofana 5G
Vahaolana raha tsy mifandray amin'ny tamba-jotra na Internet ny Wi-Fi Android
Ahoana ny fomba fanovana DNS amin'ny Fire TV Stick
Ahoana ny fanamafisana ny serivisy Vodafone
Ahoana ny fomba hitondrana ny Internet any amin'ny rihana rehetra sy ny zoron'ny trano
Mizarà fifandraisana an-tariby nefa tsy mampiasa router
Mamorona tambajotra VPN hilalao an-tserasera iray amin'ny alàlan'ny LAN
Ny tenimiafina tsy mety ary fidirana ho an'ny mpampiantrano rehetra
Ampifandraiso amin'ny seranan-tsambo mora manokatra seranan-tserasera ny seranan-tsambo
Fifandraisana an-telefaona lavitra avy amin'ny iPhone / iPad amin'ny solosainao